Doorashooyinka Nigeria ayaa la joojiyay. - BBC News Somali
Doorashooyinka Nigeria ayaa la joojiyay.
2 Abriil 2011
Image caption Qalabka doorashooyinka dalka Nigeria
Maamulayaasha Nigeria waxay sheegeen inay doonayaan in doorashooyinka ay qabtaan maalinta Isniinta. Codbixintan waxaa loo arkayay mid aad muhiim u ah. Tijaabo in Nigeria ay qaban karayso doorasho lagu kalsoonaan karo.
Saddex goor oo hore, taas oo macnaheedu yahay codbixin kasta tan iyo markii xukunka milaterigu dhammaaday sanadkii 1999kii, dadku waxay arkeen codkooda oo la xadayo. Siyaasiyiintu waxay isticmaali jireen ciidan u gaar ah si ay dadka u handadaan iyo xeelado kala duwan iyo khiyaamo si ay codadka ugu shubtaan.
Hase ahaatee xilligan, imaatinka guddoomiyaha doorashooyinka ee isbeddel doonka ah ayaa rajo gelisay dalka Nigeria. Dadku waxay doorashada ugu soo baxeen tobannaan milyan oo qof si ay maanta codka u dhiibtaan laakiin saacaddu markay ahayd siddeeddii aroornimo diyaaradihii dibadda ka keeni lahaa qalabka lagu codeynayo weli sooma degin. Duullimaadyada dalka Nigeria waa in la joojiyo marka doorasho dhacayso sababo xagga ammaanka la xiriira awgood.
Sidaasi darteed guul darrooyin cad oo dhinaca abaabulka ah oo dadka qaar ay ku sheegayaan qiyaas xumo madaxa doorashooyinka ayaa dad badan waxay isweydiinayaan in runtii weligeed wax isbeddeli doonaan.